Ndeha isika hanangana tanan-dehibe vaovao! – Malag@sy Miray
aro ireo mponina eto an-drenivohitra no mimenomenona, tsy afa-po amin’ny fiaraha-monina an-tanàn-dehibe kanefa tsy afa-manohatra. Misy ireo tsy mahatanty korontana, fifanjevoana, fitohanan’ny lalana, fahateriteren’ny arabe, loton’ny rivotra, ny tsy fanarahan-dalàna, sns.Alefantsika ny eritreritra satria raha tsy misy ny eritreritra tsy misy ny tanjona ary rehefa tsy misy ny tanjona dia tsy misy ny tody. Somary ovaintsika kely ny ohabolana ka ndeha ataontsika hoe « ny tody hisy raha mazava ny tanjona ». Ndeha hotanisaina fohy ny tanjona amin’izany tetikasa momba ny vohitra na tanandehibe vaovao izany:
Tanàna vaovao, madio, mirindra mba ho tsara ny fiaraha-monina
Olona mifanaja sy madio ary manaraka ny fitsipi-pifehezana misy eo amin’ny samy mpiray tanàna
làlana malalaka, miaina tsara ny fifamoivoizana, mety ahafahan’ny fiara enina na valo mifanena amin’ny toerana sasantsasany
Ny tari-by mitondra ny herin’aratra dia milevina na milentika any ambanin’ny tany fa tsy mikirozaroza eny ambony rehetra eny
Tanàna ifantohan’ny orinasa sy ny varotra ary ny fifandraisana ka mampandroso haingana ny toe-karena
Mponina vonina ny hiasa, hiasa tsara sy haingana ary tena amin’ny fo fa tsy terena na miandry fampitahorana na fampitandremana hatrany vao hanao izany
Fanorenana trano isan-karazany manaraka ny fitsipi-panorenana sy ny drafitra maty paikan’ny fitantanana ny tanàna (construction suivant le plan d’urbanisme)
Hatreo aloha sao dia tsy araky ny sain’ny sasany. Misy sakana vitsivitsy momba ny fananan-tany sy ny vola enti-manorina mila ahitana vahaolana haingana mba ahafana manatanteraka izany. An’isan’izany sakana mila vahàna izany ireto manaraka ireto :
Tsy tokony hifikitra be fahatany amin’ny tany kely ananany ny olona fa hanambatra izay anjarany amin’ny hafa ho an’ireo toerana voafidy hananganana izany tanan-dehibe vaovao izany. Afaka omena tany any amin’ny toeran-kafa hanoloana izany ny mpitondra saingy raha sarotra izany dia mila politika mijoro tsara sy matanjaka momba ny fanajariana sy fizarana ara-drariny ny tany misy. (Na tampoketsa aza misy tompony vitsivitsy…)
Mila miara-mirohotra amin’ny fanjakana ireo orinasa sy mpampiasa vola eto Madagasikara hanangana na hametraka ny orin’asa mpitantana sy tena mikirakira vola amin’io faritra io. Ka orinasa fitrandrahana na fanodinana no tena hisy ao fa orinasa misahana ny varotra sy ny fifanakalozana ary ny serasera. Mety anisan’izany ny banky, ny magazay lehibe, ny birao maro karazany mpanapa-kevitra ho an’ny orinasany mpitrandraka na mpanodina, ivo toeran’ny fifandraisana sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknolojia avo lenta, ny orinasa amin’ny haino aman-jery sns.
Inona ny voka-tsoa mey aterak’izany tetik’asa izany?
fanomezana asa ho an’ireo mpanao trano sy ny foto-drafitr’asa isan-karazany ka mampiakatra ny fidiram-bolan’ny mponina mba ahafahany manjifa sy manatsara kokoa ny fiainany
fanitarana ny orinasa efa misy na fananganana ny orinasa vaovao ka mety hampitombo ny vola miditra ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana
hampiodina haingana ireo fampiasam-bola (mbola resaka hafa ny aterak’izay)
hanome ohatra ho an’ny malagasy sasany amin’ny filaminana, fanarahan-dalàna, fahadiovana, fanajàna ny fanànana iombonana, fitiavana fandrosoana, fanarahan-dalàna sy ny fitsipika tsy an-tery fa an-tsitra-po, fahazotoana miasa amin’ny fairaha-monina mirindra sy milamina ary madio ka mampihena ireo fahakizintinana sy hasiahana misy eo amin’ny mponin’Antananarivo na mpandeha an-tongotra, na mpivarotra, na mpitondra fiara-kodia na mpitondra môtô.
sehatra ahafahana mampiseho an’ireo vahiny mety hampiasa vola ny tsy dia fifanalavitan’ny toe-tsaina enti-miasa
fifandraisana tsara amin’ireo mponina sy ny pifanerasera ka tsy ho ambanin-javatra ny fifampiarahabàna, ny fifampisaorana ny fifanaovam-beloma am-panajàna fa indrindra ny fifampitsikitsikiana izay mitondra hery tsara ho an’ny fiaraha-monina.
renivohitra ara-toe-karena ho lavitry ny fahantràna sy ny fahadiranovana maro samihafa
Tsy ho azo ekena ao amin’izany tanàna izany ny loto, ny fahantrana amin’ny lafiny rehetra, ny tsy fanarahana ny fitsipika mifehy ny hakamoana, ny fanambaniana mety hisy amin’ireo tsy mitovy saranga miara-miasa sy miara-monina, …mmmmhhh! nofinofiko eto Dago izany, enga anie hisy tanteraka na dia ny ampahany fotsiny aza. (indrindra ireo tariby an’ny Jirama mandreraka maso misy papango na taditady mihantokantona eny rehetra eny sy ny fifamoivoizana ary ny fahadiovana
tsapako fa betsaka ireo tsy mahazo ny anton’izany soso-kevitra izany. Fantatro fa maro no mifikitra amin’ny taniny ka mahatonga sakana lehibe ho an’izay teti-kasam-pivoarana izany.
Nefa ilaina io ho fitiliana ny fitotonganana tsy voafehy.